UThixo Uyakuthuthuzela Yaye Uyakuthanda (2 Korinte 7:6)
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMoore IsiMyanmar IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
“UThixo, obathuthuzelayo abo badakumbileyo, wasithuthuzela.”—2 KORINTE 7:6.
‘UNyana kaThixo wandithanda waza wazinikela ngenxa yam.’—GALATI 2:20
ISIZATHU SOKUBA ABANYE BENGAKUKHOLELWA OKO: Abanye abantu nakuba besiva ubunzima, baye bonqene ukucela uncedo kuThixo kuba becinga ukuba bazizikade kuThixo, nokuba akanakubanceda. URaquel olibhinqa uthi: “Xa ndibona iingxaki abanye abantu abanazo, ezam ziye zibonakale ziyimfeketho ndize ndibe madolw’ anzima ukucel’ uncedo kuThixo.”
OKUFUNDISWA LILIZWI LIKATHIXO: UThixo ubesoloko ebanceda yaye ebathuthuzela abantu. Wonke umntu emhlabeni unesono esibangela ukuba angakwazi ukwenza ukuthanda kukaThixo ngokugqibeleleyo. Nakuba kunjalo, uThixo ‘wasithanda waza wathumela uNyana wakhe uYesu Kristu njengombingelelo wokucamagushela izono zethu.’ (1 Yohane 4:10) Ngokufa kukaYesu okuyintlawulelo, uThixo wenze sakwazi ukuxolelwa izono zethu, saba nesazela esimsulwa, sanalo nethemba lobomi obungunaphakade kwihlabathi elinoxolo. * Ngaba loo ntlawulelo ayibonisi ukuba uThixo unomdla kumntu ngamnye?
Makhe sithethe ngompostile uPawulos. Wachukunyiswa kakhulu yintlawulelo kaYesu wade wabhala wathi: ‘Ndiphila ngokholo kuNyana kaThixo, owandithandayo waza wazinikela ngenxa yam.’ (Galati 2:20) UYesu wafa ngaphambi kokuba uPawulos abe ngumKristu. Nakuba kunjalo, uPawulos wayijonga intlawulelo njengesipho esikhethekileyo uThixo amphe sona.
Intlawulelo engokufa kukaYesu isisipho esikhethekileyo uThixo akupha sona nawe. Esi sipho sibonisa indlela oxabiseke ngayo kuThixo. Sinokukunika “intuthuzelo engunaphakade nethemba elilungileyo,” size ‘sikuqinise kuso sonke isenzo esilungileyo nelizwi.’—2 Tesalonika 2:16, 17.
UYesu wanikela ngobomi bakhe kwiminyaka eyi-2 000 eyadlulayo. Bubuphi ubungqina kule mihla obubonisa ukuba uThixo ufuna ukuba nobuhlobo nathi?
^ isiqe. 5 Funda ngakumbi ngentlawulelo kaYesu, kwisahluko 5 sencwadi ethi, Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.